Ogow dhammaan furayaasha sirta ah ee Android | Androidsis
Telefoonkeena Android wuxuu leeyahay sir ka badan inta badan oo aan ognahay. Si loo fuliyo ficillada qaarkood ee taleefanka, ma aadi karno goobaha, laakiin waxaan isticmaalnaa koodhadhka taasi waxay noo horseedaysaa mid ka mid ah liiska qarsoodiga ah ee taleefanka. Qaddarka lambarrada noocan ah ee ku jira nidaamka qalliinka ayaa aad u ballaaran.
Waayo, Marka xigta waxaan ka hadli doonaa xeerarkan sirta ah, waxaan kuu sheegeynaa waxa ay yihiin iyo kuwa ugu muhiimsan ee ay tahay inaan ku ogaano Android. Maaddaama ay dhici karto in mararka qaarkood ay waxtar noo yeelan doonaan.
1 Xeerarka USSD ee ku saabsan Android
2 Xeerarka sirta ah ee ku saabsan Android
2.1 Xeerarka Macluumaadka
2.2 Xeerarka qaabeynta Android
2.3 Xeerarka kaabta
2.4 Xeerarka baaritaanka
2.5 Xeerarka horumarinta
Xeerarka USSD ee ku saabsan Android
Xeerarkan sirta ah waxay leeyihiin magaca USDD, taas oo laga soo gaabiyey "Macluumaadka Adeegga Dheeraadka ee Aan Habaysnayn", oo u imanaya inay tiraahdo waa adeeg dhameystiran ee xogta aan habeysnayn. Waa hab maamuus mas'uul ka ah dirista macluumaadka adoo adeegsanaya GSM. Waad ku mahadsan tahay, ficilada waxaa lagu kiciyaa meel fog iyadoo la dirayo lambar gaar ah.
Si aan ugu isticmaalno lambarradan sirta ah Android-ka uma baahnin inaan wax rakibno. Waxa kaliya ee ay tahay inaan isticmaalno waa codsiga taleefanka iyo kiiboodhka. Marka isticmaalkeedu runtii waa mid fudud. Badanaa, waxay ku bilaabmaan ama ku dhammaadaan xashiish ama xiddig. Liiska koodhadhku waa isku mid adduunka. Xaaladaha qaarkood, badanaa soo saaraha ama hawl wadeenka ayaa bixiya macluumaadkan.
Laakiin, haddii aysan taasi dhicin, waxaan kuu daayeynaa furayaasha sirta ah ee Android. Waxay u qaybsan yihiin dhowr qaybood, si markaa ay ugu fududaato abaabuliddooda ama adeegsiga midka lagama maarmaanka u ah wakhti kasta.
Xeerarka sirta ah ee ku saabsan Android
Kahor intaadan isticmaalin midkoodna, way fiicantahay in la ogaado in adoo adeegsanaya lambarradan, ficil lagu fulinayo taleefankeena Android. Tani waxay sababi kartaa wax inay ku dhacaan taleefanka, sida tirtirka xogta. Intaas waxaa sii dheer, menusyada la soo bandhigay ama xulashooyinka soo baxa, waxay ku noqon karaan Ingiriis xaalado badan. Marka waa inaad ka taxaddartaa isticmaalkeedaqaasatan hadii aynaan runti aqoon sida ay u shaqeeyaan.
Inta badan lambarradan sirta ah ayaa guud ahaan loogu talagalay taleefannada Android. Markaa waxay u badan tahay inaad awood u yeelan doonto inaad ku isticmaasho qalabkaaga. In kasta oo ay kuxirantahay astaanta, waxaa jira qaar aan shaqeyn ama ka duwan inay awood u yeeshaan marinka ama ficilka la yiri.
Waxaan ku tusineynaa hoosta xeerarka loo qaybiyay qeybahooda, si aad fikrad cad uga hesho iyaga. Marka lagu daro lambar kasta oo sir ah, waxaan kuu sheegeynaa ficilka ay sababaan ama isticmaalka ay ku leeyihiin taleefankeena Android.
* # 06 # Waxay mas'uul ka tahay muujinta IMEI ee taleefanka
* # 0 * # Liiska macluumaadka
* # * # 4636 # * # * Liiska muuqaalka guud ee qalabka
* # * # 34971539 # * # * Macluumaadka kamaradda
* # * # 1111 # * # * Muujinayaa nooca barnaamijka TLC
* # * # 1234 # * # * Waxay muujinaysaa nooca barnaamijka PDA
* # * 12580 369 # Qalabka taleefanka ee Android iyo macluumaadka software
* # 7465625 # Xaaladda qufulka aaladda
* # * # 232338 # * # * Waxay na siinaysaa cinwaanka MAC ee qalabka
* # * # 2663 # * # * Muuji nooca shaashadda taabashada aan hayno
* # * # 3264 # * # * Muuji nooca RAM
* # * # 232337 # * # Waxaad arki kartaa cinwaanka Bluetooth-ka ee taleefanka
* # * # 8255 # * # * Xaaladda Hadalka Google
* # * # 4986 * 2650468 # * # * Waxay bixisaa PDA iyo macluumaadka qalabka
* # * # 2222 # * # * Bixi macluumaadka FTA
* # * # 44336 # * # * Wuxuu siiyaa macluumaad ku saabsan Firmware iyo Changelog
Xeerarka qaabeynta Android
* # 9090 # Dejimaha ogaanshaha telefoonka Android
* # 301279 # Dejinta HSDPA iyo HSUPA
* # 872564 # Dejinta USB-ga
* # * # 273282 * 255 * 663282 * # * # * Waxay daryeeshaa taageerida galka
* # * # 197328640 # * # * Fur qaabka tijaabada ee ku saabsan Android
* # * # 232339 # * # * Tijaabi hawlgalka Wi-Fi
* # * # 0842 # * # * Tijaabada iftiinka iyo gariirka ee taleefanka
* # * # 2664 # * # * Tijaabi hawlgalka shaashadda taabashada
* # * # 232331 # * # * Hubi hawlgalka Bluetooth
* # * # 7262626 # * # * Tijaabada goobta
* # * # 1472365 # * # * Falanqaynta degdegga ah ee xaaladda GPS
* # * # 1575 # * # * Falanqaynta GPS oo buuxa
* # * # 0283 # * # * Imtixaanka loopback
* # * # 0 * # * # * Imtixaanka LCD
* # * # 0289 # * # * Tijaabi sida codka ugu shaqeeyo Android
* # * # 0588 # * # * Ku dhawaanshaha falanqaynta dareemayaasha
* # 9900 # Qashinka Nidaamka
## 778 (iyo badhanka wicitaanka cagaaran) Soo bandhigayaa menu-ka taleefanka EPST
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » Maxay yihiin furayaasha qarsoodiga ah ee ku jira Android